साथीहरूसँग घडी 7
दाबी र तन्त्रमन्त्र कुराको बारेमा, एक मित्र सोध्छ: भविष्यमा हेर्न को लागी यो साँच्चै सम्भव छ?
हो। यो सम्भव छ। समय विगत, वर्तमान र भविष्यबाट विभाजित छ। हामी विगतलाई हेर्छौं, जब हामीले हाम्रो दिमागमा के भएको थियो भनेर याद राख्छौं। विगतमा यो दृश्य सबैले गर्न सक्छन्, तर सबैले भविष्यमा देख्न सक्दैनन्, किनभने थोरैले विगतको ज्ञानलाई भविष्यमा हेर्न बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग गर्छन्। यदि कसैले विगतको घटनाका सबै कारकहरू र असरहरूलाई ध्यानमा राख्यो भने उसको ज्ञानले उसलाई निश्चित भविष्यका घटनाहरूको भविष्यवाणी गर्न सक्षम गर्दछ, किनकि भविष्य त्यो समयको विभाजन हो जुन वास्तविकतामा आएको छैन, अझै पनि, विगतका कार्यहरू , फेशन, निर्धारण, भविष्य सीमित, र, तसर्थ, एक दर्पण जस्तै, विगतको ज्ञान प्रतिबिम्बित गर्न सक्षम छ भने, उसले भविष्यका घटनाहरू भविष्यवाणी गर्न सक्छ।
के यो अतीत र घटनाहरूको वास्तविक घटनाहरू हेर्नको लागी सम्भव छैन जस्तो कि तिनीहरू भविष्यमा स्पष्ट र स्पष्ट रूपमा जस्तो हुनेछ जस्तो कि त्यो वर्तमान देख्नुहुन्छ?
यो सम्भव छ, र धेरैले यसलाई गरेका छन्। यो गर्नको लागि एकले प्रलोभन, स्पष्ट हेराई, वा दोस्रो दृश्य भनिन्छ के प्रयोग गर्दछ। स्पष्ट रूपमा हेर्नका लागि, फ्याकल्टीहरूको दोस्रो सेट वा हेर्ने भित्री भाव प्रयोग गरिन्छ। आँखा प्रयोग गर्न सकिन्छ, यद्यपि स्पष्टताको लागि आवश्यक छैन, त्यो संकायको लागि जुन दृश्यको अनुभूतिबाट कार्य गर्दछ उसले आफ्नो कार्य आँखाबाट अन्य केही अ organ्ग वा शरीरको अ transfer्गमा सार्न सक्छ। वस्तुहरू त्यसपछि देख्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि, औंलाहरू वा सौर प्लेक्ससको सल्लाहबाट। जहाँ दाबी गर्नेले हामी टाढा भएका वस्तुहरू पार गर्यो भनेर हेर्छन् वा पारित भएका घटनाहरूमा देख्छन्, शरीरको त्यो भाग जसबाट यो गरिन्छ भौंको माथि मात्र खोपडीमा हुन्छ। त्यहाँ एक मनोरम स्क्रिनमा दृश्य वा वस्तु देखा पर्दछ जुन प्राय: स्पष्ट रूपमा देखिन्छ मानिन्छ दाबी गर्ने ठाँउमा भए जस्तो। त्यसपछि देखिने कुराकानी गर्न आवश्यक पर्ने सबै कुराको संकाय हो।
कहिलेकाहीँ हामी हाम्रो सबै अनुभवको विरोध गर्दा क्लैयरवुअरीजस्तै हेर्न कसरी सम्भव छ?
यस्तो दृश्य सबैको अनुभव भित्र हुँदैन। यो केहि को अनुभव भित्र छ। अनुभव नभएका धेरैले यो अनुभव गरेकाको गवाहीमा शंका गरेका छन्। यो प्राकृतिक कानूनको विपरित होईन, किनकि यो एकदम स्वाभाविक हो, र सम्भव छ जसका लि sha्गा शरीरा, सूक्ष्म शरीर, आफ्नो शरीरको कोशिकामा पनि दृढताका साथ बुनाइएको छैन। हामी हेर्ने वस्तुहरू, र हामी ती वस्तुहरू के माध्यम बाट हेर्छौं विचार गर्नुहोस्। दर्शन आफै रहस्य हो, तर चीजहरू जुन दृष्टिसँग सम्बन्धित छ हामी एक रहस्यलाई ध्यान दिदैनौं। यसैले, हामीसँग शारीरिक आँखाहरू छन् जुन हामी हावामा हेर्छौं र त्यहाँ भौतिक वस्तुहरू देख्छन्। हामी सोच्दछौं कि यो एकदम प्राकृतिक छ, र यस्तै छ। आउनुहोस् हामी देख्न सक्ने विभिन्न राज्यहरू विचार गरौं। मानौं कि हामी गँड्यौला वा कीरा जस्तै पृथ्वीमा थियौं; त्यहाँ हामीले दृश्यात्मक ज्ञान हुनुपर्दछ, तर हाम्रो संकाय धेरै सीमित हुने थियो। आँखाका रूपमा चिने अंगहरू ठूला दूरीहरू हेर्न प्रयोग गर्न सकिँदैन, र शारीरिक दृष्टि धेरै छोटो ठाउँमा सीमित हुनेछ। एक चरणको प्रगति गर्नुहोस् र मानौं हामी माछाहरू हौं। हामीले त्यसपछि पानीमा देख्न सक्ने दूरी धेरै बढी हुने थियो र आँखा पानीको माध्यमबाट आउँदै गरेको प्रकाश कम्पनहरू दर्ता गर्न अभद्र हुनेछ। माछा को रूपमा, तथापि, हामीले पानी मार्फत वा वास्तवमा हावा जस्तो तत्व छ कि बाहेक अरू कुनै तरीकाले देख्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्नु पर्छ। यदि व्याकुलताले हामीले नाक बाहिर निकाले र हावामा पानी माथि राख्यौं तब हामी सास फेर्न सक्नुहुन्न, र आँखा उपयोगी हुने छैन किनभने तिनीहरूको तत्त्वबाट बाहिर निस्किन्छ। जनावर वा मानव जातिको रूपमा हामी माछाको अग्रिम चरणमा छौं। हामी हाम्रो वायुमण्डलको माध्यमबाट देख्छौं र पानी मार्फत भन्दा धेरै टाढाका चीजहरू आँखा मार्फत वस्तुहरू बुझ्न सक्षम हुन्छौं। तर हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो वातावरण, बाक्लो र नरम भएकोले हाम्रो दृष्टि सीमित छ। सबैलाई थाहा छ शिकागोको वायुमण्डलमा, क्लेभल्याण्ड र पिट्सबर्ग वस्तुहरू केही माईलको दूरीमा मात्र देख्न सकिन्छ। शहरहरू जहाँ सबै स्पष्ट छ, त्यहाँ thirty० वा forty० माईल देख्न सकिन्छ, तर एरिजोना र कोलोराडोको पहाडहरूबाट धेरै सय माईलहरूको दूरी कभर हुन सक्छ, र यो सबै भौतिक आँखाले। जसरी स्पष्ट वायुमण्डलमा उकास्दै कसैले स्पष्ट देख्न सक्छ, त्यसरी नै कसैले हावा भन्दा अर्को तत्वमा उत्रेर स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छ। एलिमेन्ट जुन क्लेयरवाईयन्टले प्रयोग गर्नको लागि प्रयोग गरिएको छ त्यो ईथर हो। कीरा वा माछाको दूरी को विचारको रूपमा पनि ईथरमा देख्ने हाम्रो दाबीले यसको महत्त्व गुमाउँछ, जसको आँखाले जीवित व्यक्तिहरूलाई अदृश्य वस्तुहरू पत्ता लगाउन सक्छ, जसको गहिरो आँखाले जीवित व्यक्तिहरूको लागि अदृश्य वस्तुहरू पत्ता लगाउन सक्दछ। समतलमा तल्लो तहमा।
Clairvoyance मा प्रयोग गरिएका अङ्गहरू के हुन्, र कसरी एक वस्तुको दृष्टिबाट नजिकबाट वस्तुहरू भन्दा ठूलो दूरीमा पठाइन्छ, र ज्ञात ज्ञात अज्ञात देखिने देखिन्छ?
शरीरमा कुनै पनि अ cla्ग दाँजेरो उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर शरीरका ती अंगहरू वा अंगहरू जुन स्वाभाविक वा बुद्धिमानीपूर्वक क्लेयरवाईयन्टले प्रयोग गर्छन् मस्तिष्कको कोर्टेक्स, फ्रन्टल साइनस, अप्टिक थलामी, र पिट्यूटरी शरीर। नजिकैका भौतिक वस्तुहरू आँखामा वायुमंडलीय प्रकाश तरंगहरूद्वारा प्रतिबिम्बित हुन्छन्, जसले यी प्रकाश तरंगहरू वा कम्पनहरूलाई ऑप्टिक स्नायुमा रूपान्तरण गर्दछ। यी कम्पनहरू अप्टिक ट्र्याक्टसँगै वहन गरिन्छ। यी मध्ये केही अप्टिक थालमीलाई बताईन्छ, जबकि अरू मस्तिष्क कोर्टेक्समा फ्याँकिन्छन्। यी फ्रन्टल साइनस प्रतिबिम्बित हुन्छन्, जुन दिमागको तस्वीर ग्यालरी हो। पिट्यूटरी शरीर भनेको अंग हो जसको माध्यमद्वारा अहंकारले यी तस्वीरहरूलाई देख्छ। तिनीहरू अब शारीरिक छैनन् जब तिनीहरू त्यहाँ देखिन्छन्, बरु शारीरिकको सूक्ष्म छविहरू। ती भौतिक वस्तुहरू हुन् जुन अहंकारको सूक्ष्म संसारमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्, हेर्नुहोस् भौतिक वस्तुहरूको तल्लो कम्पनहरू कम्पनको उच्च दरमा बढाइएको छ। एकको दृष्टिकोण भौतिक बाट धेरै तरीकामा सूक्ष्म संसारमा स्थानान्तरण हुन सक्छ। सबैभन्दा शारीरिक आँखा केन्द्रित द्वारा छ। ईथरिक वा सूक्ष्म संसार जटिल छ, प्रवेश गर्दछ, र हाम्रो भौतिक संसार भन्दा पर जान्छ। भौतिक आँखा यति निर्माण गरिएको छ कि यसले शारीरिक संसारबाट केवल त्यस्ता कम्पनहरू दर्ता गर्दछ जुन ईथरिक वा सूक्ष्म संसारको तुलनामा ढिलो हुन्छ। शारीरिक आँखाले ईथरिक कम्पनहरू प्राप्त गर्न वा दर्ता गर्न सक्दैन जबसम्म यो प्रशिक्षित हुँदैन वा एक प्राकृतिक दाबी गर्ने बाहेक। जहाँसम्म पनि एक व्यक्तिको लागि आँखाको केन्द्रबिन्दुलाई भौतिक संसारबाट इथरिक वा सूक्ष्म संसारमा परिवर्तन गर्न सम्भव छ। जब यो गरिन्छ, तब अंगहरू वा शरीरको अंशहरू उल्लेख गर्नु अघि ईथरिक संसारसँग जोडिएका हुन्छन् र यसबाट कम्पनहरू प्राप्त गर्दछन्। जसरी एक व्यक्तिले आफ्नो इच्छाको वस्तुलाई त्यस वस्तुमा फर्केर हेर्दछ, त्यसरी दाबी गर्नेले टाढाको वस्तुलाई चाहेको वा हेर्नको लागि निर्देशित गरेर देख्छ। यो कसैको लागि अद्भुत लाग्न सक्छ, तर जब तथ्यहरू जाने पछि आश्चर्य समाप्त हुन्छ। पूर्णतया प्राकृतिक प्रक्रियाले देख्ने जो स्पष्ट रूपमा उदाउँछ वा बढ्दो दूरीको स्पष्ट संसारमा हुर्काइन्छ, गहिरो समुद्री डुबुल्की पानीमा आफ्नो सीमित दर्शनबाट कुहिरो वातावरणमा देख्न सकिन्छ, र त्यसपछि उच्च उचाइमा जहाँबाट उसले चीजहरू अझ लामो दूरीमा देख्छ। अध्ययन र प्रशिक्षणको लामो पाठ्यक्रमले स्पष्ट रूपमा हेर्न सिकेको व्यक्तिले यस विधि अनुसरण गर्नु पर्दैन। उसलाई केवल एक ठाउँको मात्र सोच्न आवश्यक छ र यदि उसले चाहन्छ भने यो हेर्छ। उसको विचारको प्रकृतिले उसलाई विचारसंग मिल्दोजुल्दो ईथरको स्ट्रैटसँग जोड्छ, जस्तो कि उसले आफ्नो आँखा फर्काउँछ जुन उसले देखेको वस्तुमा गर्छ। देखीएको वस्तुको समझ उसको बुद्धिमतामा निर्भर गर्दछ। एक ज्ञात देखि अज्ञात अदृश्य को लागी आफ्नो दर्शन स्थानान्तरण गर्न सक्दछ र समानता को कानून द्वारा उसले के देख्छ।
भविष्यमा एक आविष्कारवादी भविष्यलाई जब पनि उसले चाहानु सक्छ, र के गर्न सक्दछ यो एक क्लोयरभेट्ट फ्याट्याकले यसलाई गर्ने?
दाबी गर्ने व्यक्ति जादूगर होईन, र यद्यपि एक जादूगर दाबी गर्ने पनि हुन सक्छ, ऊ आवश्यक छैन। एक जादूगर एक हो जसलाई प्रकृतिको कानूनको ज्ञान हुन्छ, जो ती कानूनहरूसँग अनुरूप रहन्छ, र जो आफ्नो उच्च बुद्धिमताद्वारा भित्रबाट निर्देशित हुन्छ। मजदुरहरू ज्ञान र शक्तिको डिग्रीमा फरक हुन्छन् पनि मजदुरले ईन्जिनियर वा खगोल विज्ञबाट बुझ्ने क्षमता र क्षमतामा फरक हुन्छन्। एक दावी प्रविधिको विकास नगरी एक जादूगर हुन सक्छ, तर यो संकाय को विकसित गरेको छ जो वैज्ञानिकले यो खनिज संसारको विषयहरु संग व्यवहार गर्दा मात्र यो प्रयोग गर्दछ। उसले यसलाई खुशीको लागि वा आफ्नै वा अरूको सनकलाई तृप्तिको रूपमा प्रयोग गर्दैन। जादूगरले भविष्यलाई हेर्नको लागि दाबी गर्ने संकायको प्रयोग गर्न आवश्यक छैन, यद्यपि उसले त्यसो गर्न सक्छ, यदि उसले भविष्यमा कुनै खास समयावधिमा सोचविचार गरेर र केमा लागिरहेको छ भनेर जान्न इच्छुक छ भने त्यो समय।
यदि एक आविष्कारकले पर्दा घटाउन सक्छ भने किन चर्चितहरू होइन, व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा आउँदै आएका घटनाहरूको ज्ञानबाट लाभ उठाउँछन्?
भविष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्ने र आफ्नो ज्ञानबाट व्यक्तिगत फाइदा लिन सक्ने एक झूटा वैज्ञानिक सही अर्थमा एक जादूगर हुन बन्द हुनेछ। एक जादूगरले प्राकृतिक कानूनको साथ अनुरूप काम गर्नुपर्दछ र प्रकृतिको बिरूद्ध होईन। प्रकृतिले सम्पूर्णको क्षतिको लागि एक व्यक्तिलाई फाइदा लिन वर्जित गर्दछ। यदि एक जादूगर, वा जो कोही साधारण मानिससँग भएको भन्दा बढी शक्तिहरु संग काम गर्छ भने उसले ती शक्तिहरु अरुको बिरूद्ध वा उसको व्यक्तिगत हितका लागि प्रयोग गर्छ उसले कानूनको बिरूद्धमा होईन, उसले काम गर्नु पर्ने विपक्षमा हो, र त्यसैले ऊ नक्कल हुन्छ। प्रकृति र एक स्वार्थी प्राणीमा वा अन्यथा उसले विकास गरेको हुन सक्छ शक्तिहरू गुमाउँछ; जुनसुकै अवस्थामा पनि उहाँ एक सही जादूगर हुन छाड्नुहुन्छ। एक जादूगरलाई केवल एक व्यक्ति को रूपमा र आफ्नो कामको लागि चाहिने चीजको लागि मात्र हकदार छ, र स्वार्थको भावना वा लाभको प्रेमले उसलाई कानुनमा अन्धो बनाउँदछ। यो यति अन्धा भएको छ, ऊ त्यसपछि जीवनलाई शासन र नियन्त्रण गर्ने कानूनहरू बुझ्न र बुझ्न असमर्थ हुन्छ, जुन मृत्युलाई पछाडि पार गर्छ, र सबै कुराको सम्बन्ध राख्दछ र सबैको भलाइका लागि सबै चीजहरू एकसाथ बाँध्छ।
'तेस्रो आँखा' के हो र दाबी गर्ने र जादूगरले यसलाई प्रयोग गर्दछ?
"तेस्रो आँखा" केही पुस्तकहरुमा उल्लेख गरिएको छ, विशेष गरी "गुप्त शिक्षा", टाउकोको बिन्दुमा रहेको त्यो सानो अंग हो जसलाई फिजियोलोजिस्टहरूले पाइनल ग्रन्थि भन्छन्। दाबी गर्ने व्यक्तिले तेस्रो आँखा वा पाइनल ग्रन्थि टाढाका चीजहरू हेर्न वा भविष्य हेर्नको लागि प्रयोग गर्दैनन्, यद्यपि केही दाबी गर्नेहरू जसले राम्रो र शुद्ध जीवन बिताएका छनौट दोस्रोका लागि तेस्रो आँखा खोलिएको हुन सक्छ। जब यो हुन्छ तिनीहरूको अनुभवहरू पहिले भन्दा फरक छन्। जादूगरले साधारणतया पाइनल ग्रंथि प्रयोग गर्दैन। भविष्यमा हेर्नका लागि पाइनल ग्रन्थि वा तेस्रो आँखाको प्रयोग गर्नु आवश्यक छैन किनकि भविष्य समयका तीन भागहरू मध्ये एक हो, र पाइनल ग्रन्थि बाहेक अन्य अंगहरू भूतकालमा हेर्दा प्रयोग गरिन्छ, वर्तमानलाई हेर्दै, वा भविष्यमा ध्यान दिएर। पाइनल ग्रन्थि वा तेस्रो आँखा केवल समयको भाग भन्दा माथि छ, यद्यपि यसले ती सबैलाई बुझ्दछ। यो अनन्तता संग गर्न छ।
कोइराला ग्राउन्ड कसले प्रयोग गर्दछ, र यसको प्रयोगको वस्तु के हो?
केवल एक उच्च विकसित व्यक्ति, एक उच्च जादूगर वा मास्टर, इच्छा अनुसार "तेस्रो आँखा" वा पाइनल ग्रन्थि प्रयोग गर्न सक्दछ, यद्यपि धेरै सन्तहरू, वा निस्वार्थ जीवन बिताएका मानिसहरु र जसको आकांक्षालाई उच्च पारिएको छ, को खोलिएको अनुभव भयो। "आँखा" उनीहरूको उच्च उचाई को क्षणहरूमा। यो केवल यो प्राकृतिक तरिकामा गर्न सकिन्छ, तिनीहरूको जीवनको दुर्लभ क्षणहरूमा फ्ल्याशको रूपमा र इनामको रूपमा, उनीहरूको विचार र कार्यहरूको फल। तर त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफैंलाई आँखा खोल्न सक्दैनन्, किनकि उनीहरूलाई तालिम दिइएको छैन, वा किनभने तिनीहरूले प्राप्त गर्न आवश्यक शरीर र दिमागको लामो प्रशिक्षण कोर्सलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। एक जादूगरले शरीरको कानून र दिमागलाई नियन्त्रण गर्ने कानूनहरु थाहा पाउँदछ, र नैतिक शुद्ध जीवन बिताएर अन्तिम चोटि शरीर र दिमागको लामो अव्यवस्थित कार्यहरु लाई प्रयोगमा ल्याउँछ, र अन्ततः उसको खोल्न सक्षम छ " तेस्रो-आँखा, "pineal ग्रंथि, आफ्नो इच्छा द्वारा। पाइनल ग्रन्थि वा "तेस्रो आँखा" को प्रयोगको उद्देश्य भनेको ती सबै प्राणीहरू बीचको सम्बन्धलाई हेर्नु हो, यथार्थको माध्यमबाट वास्तविक अवलोकन गर्नु, सत्यलाई बुझ्नु, र बुझ्नु र असीमसँग एक हुनु।
तेस्रो आँखा वा पाइनल ग्रंथि कसरी खुल्छ, र त्यस्तो उद्घाटनमा के हुन्छ?
केवल एक उच्च अर्डरको एक जादूगरले यस प्रश्नको उत्तर निश्चितताका साथ दिन सक्दछ। त्यस्ता कुनै वास्तविक ज्ञानको बहाना नगरी हामी लाभका साथ अनुमान गर्न सक्दछौं, साथै यो कसरी पूरा हुन्छ भनेर पनि अनुमान लगाउँदछ र परिणाम पनि। जो सामान्य सांसारिक जीवन बिताउँछ उसले "तेस्रो आँखा" खोल्न वा प्रयोग गर्न सक्दैन। यो शारीरिक अंग शरीर र दिमाग बीचको पुल हो। शक्ति र बुद्धिमत्ता जसले यसको मार्फत कार्य गर्दछ, सीमा र असीमित बिच पुल हो। जो परिमित मा बाँच्छ उसले परिमित मा सोच्छ र परिमित मा कार्य गर्दछ अनन्तमा बढ्न र बुझ्न सक्दैन किनकि ऊ यति बाँचिरहेको छ, सोच्दछ र कार्य गर्दछ। "तेस्रो आँखा" खोल्न तिर लैजानको पहिलो कदम विचारहरू नियन्त्रण गर्न, दिमाग सफा गर्नु, र शरीरलाई शुद्ध बनाउनु हो। यसले जीवनको जरामा प्रहार गर्दछ, र मानव विकासको सम्पूर्ण दायरा कभर गर्दछ। सबै कर्तव्यहरू इमान्दारीसाथ गर्नुपर्दछ, सबै दायित्वहरू कडाईका साथ पालन गर्नुपर्दछ, र जीवनको न्यायको भावनाको भावनाले निर्देशित गर्नुपर्दछ। एक व्यक्ति को जीवन को उच्च वस्तुहरु को विचार को लागी आधारभूत चीजहरु मा विचार को बानी, र उच्च को को परिवर्तन गर्नुपर्छ। शरीरका सबै शक्तिहरू सोच्दै माथितिर फर्कनु पर्छ। सबै वैवाहिक सम्बन्धहरू बन्द भएको हुनुपर्छ। एक त्यस्तो जीवित शरीर को लामो अव्यवस्थित मनस्थिति अंगहरू सक्रिय र जागृत हुन को कारण हुनेछ। शरीर नयाँ जीवनको साथ रोमाञ्चक हुनेछ, र यो नयाँ जीवन शरीरमा विमानबाट उडानमा उदाउँदछ जबसम्म शरीरको सबै उत्तम सारहरूले शक्तिलाई टाउकोमा पुर्‍याउँदैन र अन्तमा, आफैलाई स्वभाविक रूपमा, वा एक प्रयासले। इच्छा, सदाको लागि फूल फूल्नेछ: परमेश्वरको आँखा, "तेस्रो आँखा" खुल्नेछ। एक हजार सूर्यको चमक सत्यको प्रकाशसँग तुलना गर्नु हुँदैन जुन शरीरमा भर्दछ र चारैतिर घुम्छ र सबै स्थानमा प्रवेश गर्दछ। वस्तुहरू, वस्तुहरूको रूपमा, हराउँछन् र उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने सिद्धान्तमा समाधान हुन्छन्; र वास्तविक प्रतिनिधित्वको रूपमा सबै सिद्धान्तहरू पूरैको विशालतामा समाधान हुन्छन्। समय हराउँछ। अनन्तता सधैं रहन्छ। व्यक्तित्व व्यक्तित्वमा हराउँछ। व्यक्तित्व हराएको छैन, तर यो विस्तार र पूरै संग एक हुन्छ।